War saxaafadeedyo soo kala horjeeda
Kooxaha SRRC-da oo ku jiro Colonel Cabdullahi Yusuf Axmed ayaa saxiixay warka SRRC-da
Xasan Barise, BBCSomali.Com
Labo warsaxaafadeed oo soo kala horjeeda ayey soo kala saareen Guddiga Fududeynta IGAD ee shirka kooxaha Soomaalida oo ay wehliyaan goob-joogeyaasha beesha caalamka iyo kooxaha la isku yiraahdo SRRC oo labaduba ka hadlaya furitaanka la filayo ee wejiga saddexaad uguna dambeeya ee shirka Soomaalida.
Waxaa soo horreeyey war-saxaafadeedka kooxda SRRC-da oo soo baxay maalintii shalay, kaasoo ay kaga cabanayeen ku dhawaaqidda maalinta 13-ka bishan oo ah Sabdiga soo socda ee furitaanka wejiga saddexaad ee shirka kooxaha Soomaalida.
Inta badan ayaa saxiixday warka SRRC
War saxaafadeedkaasi oo ay ku saxiixan yihiin inta badan xubnaha kooxda SRRC-da oo uu ku jiro Colonel Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa lagu sheegay in ay u arkaan fursad kale oo la dayacayo haddii shirkaasi la furo iyadoo aanan weli xal laga gaarin dastuurka oo ay yiraahdeen qodobkiisa 30-aad farqaddiisa koowaad ee soo xulidda xubnaha baarlamaanka ayaanan weli laga heshiinin.
Kooxda SRRC-du waxay war saxaafadeedkooda ku soo jeediyeen in dib loo dhigo furitaanka maalintaasi si bey yiraahdeen looga samatabaxo waxa ay ugu yeereen guul-darro ku timaada shirka. Waxaa kaloo ay kooxda SRRC-du soo jeediyeen in ay rumaysan yihiin in aanan si guul leh shirka Soomaalida loogu dhammaystiri karin meesha uu hadda ka socdo ee Kenya ah, maaddaama bey yiraahdeen Guddiga Fududeynta ee IGAD aanu awoodin in ay xalliyaan dhibaatooyinka hortaagan shirka Soomaalida.
Warka IGAD iyo beesha caalamka
War saxaafadeedka kale ee Guddiga Fududeynta IGAD iyo kor-joogeyaasha beesha caalamka oo isagana u muuqda in uu jawaab u yahay warka SRRC-da ayaa lagu sheegay in ay aqoonsan yihiin horumarka uu shirka Soomaaliyeed gaaray marka laga soo billaabo bishii October ee sannadkii 2002 oo ahaa markii uu furmay, iyo gaar ahaan heshiiskii ay madaxda Soomaalidu saxiixeen 29-kii bishii Janaayo ee ay hoggaamiyeyaasha Soomaalidu ku go'aansadeen bey yiraahdeen in uu habka shirka Soomaalidu hore u sii socdo.
War saxaafadeedku wuxuu intaasi ku daray in dastuurka federaalka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ay tahay in ay tahay in loo arko wax ay Soomaalidu ku faani karto. Sidoo kale caddeyntii uu wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya, Kolonzo Misioka, ka bixiyey 17-kii bishii Febraayo ee qodobka 30-aad farqaddiisa koowaad ee sida loo soo xulayo xubnaha baarlamaankana loo arkaa in ay tahay hab gacan lagaga geysanayey caawinaadda meel-marinta heshiiskii niyad-wanaagga ahaa ee lagu gaaray hotel Safari Par.
Is-beddel ma jiro
War saxaafadeedka beesha caalamka iyo guddiga fududeynta shirka Soomaalidu waxaa kaloo lagu sheegay in qoraalkii wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ee shantii bishan Maarso ee sheegay in si rasmi ah loo furayo wejiga saddexaad ee shirka Soomaalida isla markaana la qeybinayo nuqulkii kama dambaysta ahaa ee dastuurka uu ahaan doono in 13-ka bishan ay tahay sideedii, sidaasi darteedna lagu casumayo dhammaan wufuudda, hoggaamiyeyaasha dhaqanka, guddiga fududeynta IGAD iyo beesha caalamkaba.
War saxaafadeedka waxaa kaloo lagu xusay in beesha caalamku ay ogtahay in qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha uu walaac ku jiro, hase yeeshee bey yiraahdeen waxaan u xaqiijinaynaa dhammaan kooxaha Soomaalida in ay mar walba gacan ka geysanayaan sidii ay Soomaalidu xal kama dambays ah uga gaari lahayd dhibaatada dalkooda, waxaa kaloo ay beesha caalamku ballan-qaadday in ay taageereyso wixii wada hadal ah ee dhex maraya hoggaamiyeyaasha Soomaalida.
Ugu dambaystii waxaa laga codsaday hoggaamiyeyaasha Soomaalida ee dib ugu laabtay dalka in ay muujiyaan waddaniyad isla markaana dib ugu soo noqdaan Mbagathi kana qeyb qaataan soo gebagebaynta shirka Soomaalida.
War saxaafadeedkan waxaa lagu soo dhoweeyey qoraalkii Golaha Ammaanka ee QM ee soo dhoweynayey heshiiska Soomaalida isla markaana cambaareynayey kooxaha isku dayi kara in ay horistaagaan habka nabadda ee Soomaaliya.